I-china ilitye lemabula lobungakanani bobomi obunqunu obunemifanekiso eqingqiweyo yentengiso mveliso kunye nabenzi | Imisebenzi ka-Atisan
Isixhobo: IBakala A Marble
Umbala: Umbala weMifanekiso okanye owenziwe ngentando
Ubungakanani: Ubungakanani boBomi okanye obuCwangcisiweyo
Inkonzo 1: Inkonzo eChongiweyo
Inkonzo 2: Uqinisekiso loRhwebo
Igama eliphambili 1: Isitayile esineeGrace ezintathu
Igama eliphambili 2: Ubungakanani boBomi kwiThathu eQhelekileyo
I-TAG: Amathathu amaThathu Imifanekiso emiThathu yeGadi IziBonelelo eziMathathu zeMarble Ubungakanani boBomi Ubume beThathu iMifanekiso eqingqiweyo Eyaziwayo Imifanekiso emiThathu eqingqiweyo Imifanekiso eqingqiweyo
Ukutshona kwelanga ngemarble ebomvu, imarmore emhlophe emhlophe, igranite eluhlaza kunye nokunye okanye okwenziweyo
Ubungakanani bobomi okanye njengezinto ozifumeneyo
Uluhlu lwemifanekiso eqingqiweyo
Imifanekiso eqingqiweyo yezilwanyana, imifanekiso eqingqiweyo yenkolo, umfanekiso oqingqiweyo ka-Buddha, ukukhutshwa ngamatye, i-Stone Bust, i-Lion Status, i-Stone Elephant Status kunye ne-Stone Animal car. Stone Fountain Ball, Stone Flower Pot, Lantern Series Umfanekiso, Stone Sink, eqingqiweyo Table noSihlalo, Stone nangokukrola, Marble nangokukrola njl
umhombiso, ngaphandle nangaphakathi, igadi, isikwere, ubugcisa, ipaki
Sinokubonelela ngemifanekiso eqingqiweyo yemarble, umfanekiso oqingqiweyo wemabhile, umfanekiso oqingqiweyo welady marble, umfanekiso oqingqiweyo wendoda, umfanekiso oqingqiweyo wendoda, umfanekiso wobungakanani bobomi, umfanekiso oqingqiweyo we-engile, umfanekiso oqingqiweyo wenkolo, umfanekiso oqingqiweyo kaMariya, umfanekiso oqingqiweyo kaYesu, umfanekiso kaBuddha, umfanekiso we-guanyin, umfanekiso wengonyama, umfanekiso wehashe, umfanekiso wendlovu Imifanekiso eqingqiweyo yokhozi, ingqayi yemabhile yentyatyambo, ibhentshi emarmore emhlophe, itafile emarmore emhlophe, umthombo weemabhile, umthombo webhola, umthombo wefengshui, ikholamu yemarmore kunye nentsika, indawo yomlilo emarmore, indawo yomlilo yombane, umfanekiso oqingqiweyo wegadi, umfanekiso ongaphandle, umhombiso oqingqiweyo wasekhaya, umfanekiso oqingqiweyo, eqingqiweyo steel stainless njalo njalo
Malunga nooThixo abathathu boBuhle
Isithathu seMarble Statue ngumhlobiso we-neoclassical, weentsomi ezintathu, iintombi zikaZeus - ezichongiweyo kwimifanekiso eqingqiweyo njengoko, ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, e-Euphrosyne, eAglaea naseThalia - ekuthiwa babemele ulutsha / ubuhle (Thalia ), uvuyo (Euphrosyne), kunye nobuhle (Aglaea).
Iinkcukacha zeStratace Graces Statue
I-Three Graces Statue ngamantombazana amathathu amangalisayo abambanayo. Imifanekiso eqingqiweyo ngobuchule isebenzisa iribhoni ukugubungela ubumfihlo beli candelo, umgca uthambile kwaye ugudile, ubonakalisa ulusu lwethenda lentombazana. Lo mzobo awunakulibaleka kwaye ngumfanekiso odumileyo wehlabathi.Umsebenzi wethu wokukrola oqeqeshiweyo unokuphinda enze umfanekiso oQinisekisiweyo weThathu ukuhombisa igadi yakho yakudala.
Ukusetyenziswa kweMifanekiso eqingqiweyo yeMarble
Khawufane ucinge indlela ebekuya kuba mnandi ngayo ukuba lo Mfanekiso uqingqiweyo weMarble Marble ubekwe kwigumbi lakho lokuhlala okanye egadini. Sisebenzisa i-marble yendalo kwaye senziwe ngesandla ngabaqingqi bethu abaziinkosi. Imizobo eqingqiweyo yeMarble Marble eyimilenze yendalo kwaye iindawo ezifihliweyo zolusu zicacile.Lo mfanekiso wobugcisa emarmore ulunge kakhulu njengomhombiso okanye isipho.
Singumatshini wemifanekiso eqingqiweyo wemabhile enembali engaphezulu kweminyaka engama-40. Sineenkosi zokuchwela eziqeqeshiweyo, ezinokubuyisela ngokugqibeleleyo imifanekiso eqingqiweyo yakudala ngokweemfuno zakho, kwaye ubungakanani bunokwenziwa ngemfuneko. Sinezinye iintlobo zemifanekiso eqingqiweyo yemabhile onokukhetha kuyo, ukuba uyafuna, nceda unxibelelane nathi.
Q: UWumnqwazi ngu kuqikelelwa Ixesha lokuzisa?
A: Ngaphakathi 30 kwiintsuku emva fumanaing phantsi-intlawulo.
Q: UWhich Ixesha lokuhlawulas zinokwamkelwa?
A:1.Ngu T / T.. 30% ngu idiphozithi kunye nama-70% ngu kuhlawulwe emva kokuvuma imveliso.
2.Ngu L / C.. Mayibe emehlweni kunye nebhanki eyaziwayo.
3.I-Western Union okanye i-Paypal yeendleko zesampulu.
Q: Yintoni tumgangatho isiqinisekiso?
A: 1.Ubugcisa beMarble buhambelana nemigangatho emibini.
a) I-ASTM C503-05 kunye ne-ASTM C1526-03 isetyenziselwe yemarmore yendalo ye Quarry.
b) SIngcibi yomdiliya umgangatho umgangatho okanye abathengi ' isicelo.
2.Ubhedu okanye ubugcisa bentsimbi obungenasici buhambelana nemigangatho emibini.
a) Ngokwengxelo yohlalutyo lwezinto ezivela kumenzi.
b)SIngcibi yomdiliya umgangatho umgangatho okanye abathengi ' isicelo.
3.Inkqubo engqingqwa kunye nolawulo lomgangatho wobungcali unako yamkela umntu wesithathu'Ukuhlolwa, njenge-SGS okanye njl.
Q: UWumnqwazi ngu Iindleko zothutho?
A: Iindleko ezi-1 ezilungele ukuthuthwa kolwandle okanye ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka phambili.
2. Yamkela inkonzo yeDDU ngendleko ezifanelekileyo.
Egqithileyo Umthombo oMgangatho olungileyo-Umhombiso wamatye endalo wamanzi angaphandle wokuhombisa ilitye lomthombo- Imisebenzi ka-Atisan
Okulandelayo: Umthombo oMgangatho olungileyo-Umthombo wamanzi angaphandle wokuhombisa ilitye lasekhaya-Imisebenzi yeAisan
Iintsika ezihombise ngemarble kunye neekholamu ze ...
Ubungakanani bobomi besinyithi obukrola ngentsimbi ...
I-Morden i-luxury marble yendlu yokuhlobisa indlu ...
Elungiselelweyo ilitye uhombiso ipilisi roman ...
igadi yangaphandle yokuhombisa yangaphakathi yentlaka wat ...
Zoo uhombiso eqingqiweyo metal ekubunjweni ubungakanani ubomi C ...